लजाउने बानी वंशमा होइन वातावरणमा निर्भर रहन्छ : अध्ययन | Everest Times UK
तमु धिं युकेद्वारा एनआरएनए युकेको कोभिड–१९ कोषलाई एकहजार ४०१ पाउण्ड सहयोग
माइला–कान्छा लकडाउन सहयोग अभियान तीनवटा गुम्बामा
भुम्दीकोट समाज युकेले भुम्दीमा ५ लाख ४० हजारको भारी पुग्ने गरी खाद्यान्न राहत बाड्यो
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) द्वारा अनलाइन मार्फत नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्दै
लकडाउनको समयमा युट्युबमा वर्ल्ड प्रीमियर हुँदै “क्यु प्ह्राे छे (भेडि गोठाले)”
एशिएन महिला एशोसिएशन (आमा) युके द्वारा लकडाउनबाट प्रभावित महिलाहरुको सहयोग
कृषि उपजको मूल्य निर्धारणको अधिकार कृषकलाई दिनुपर्छ : सांसद तामाङ [भिडियोसहित]
एनआरएनए युकेद्वारा रुकुम घटनाको घोर भर्त्सना
एक वियोगान्त प्रेम कहानी- खेम सेन्चुरीको लोकगीत “कामी दाईको छोरो”
नेपालमा कोरोनाबाट थप १ को मृत्युसँगै मृतकको संख्या ११ पुग्यो, संक्रमित २९ सय १२
चौरासी पूजाको खर्चबाट “आहात मनलाई र राहत”
एनआरएनए यूकेद्वारा ‘कोभिड–१९’ को आय–व्यय सार्वजनिक
नेपाली वेलफेयर सोसाईटी युकेद्वारा प्रदेश नंं. ७ मा पनि राहत वितरण
डा.योगी बिकाशानन्दद्वारा बेलायतबासी नेपालीबीच आफ्नो अनुभव सुनाउदै
रुकुम नरसंहार विरुद्ध पोखरामा पाचौं दिन धर्ना
नेपालमा कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै, मृतक १०, संक्रमित २ हजार ६३४ पुगे
नेपाली दूतावासद्वारा नेपाल फर्कनपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने
नि:स्वार्थ सेवामा ‘डीबी सर’
बेलायतमा कोरोनाबाट हुने मृत्युदर घट्दै सोमबार देखि विद्यालय पनि संचालनमा
लकडाउनको असरले बलबालिकालाई डिप्रेसनको समस्या देखिन सक्ने
बाँकेमा बस र ट्रक ठोक्किँदा १२ को मृत्यु, २१ घाइते
मर्यादित महिनावारी, महिलामैत्री नेपालको कार्ययोजना बनाइरहेका छौं : मन्त्री गुरुङ
Response to crime with the easing of lockdown
गुरुङ (तमू) समाज मकाउद्धारा मुख्यमन्त्री राहतकोषमा १ लाख सहयोग
चुल्हो निभ्न लागेका ११० परिवारलाई माइला–कान्छा लकडाउन राहत सहयोग
साउथ इष्ट रिजनल तमु धिं द्वारा गण्डकी अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री
नेपाली वेलफेयर सोसाईटी युकेद्वारा मुसहर बस्तीमा राहत वितरण
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४०१ पुग्यो, ६ जनाको मृत्यु
माइला कान्छा अभियानबाट सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई राहत
लजाउने बानी वंशमा होइन वातावरणमा निर्भर रहन्छ : अध्ययन
In: स्वास्थ्य योग र ध्यान
हामीमध्ये धेरैलाई ठूलो भीडका सामु बोल्न, कक्षा अगाडि गइ प्रेजेन्टेसन गर्न, पार्टी लगायत सामाजिक भेलामा सहभागी हुन अत्यन्तै असहज लाग्छ । त्यस्तै लजालु स्वभावका एकिन्डल माइकल पनि आफ्नो अधिकतम समय घरभित्रै बसेर बिताउने गर्दथे । तर उनका अभिभावक उनीजस्तो लजालु छैनन् । त्यसैले आफ्नो यस्तो विशेषताका लागि उनले आफूलाई हुर्काइएको वातावरणलाई जिम्मेवार ठर्हयाउने गरेका छन् । यसरी सानैदेखि हामीमा यस किसिमको व्यक्तित्व विकास हुने, जसको आधारमा हामीले आफूले नचिनेको व्यक्तिसग कुरा गर्न सहज वा असहज महसुस गर्ने गरेको किङ्स कलेज लन्डनकी व्यवहारिक विकास प्रोफेसर थालिया एले बताउछिन् । यसरी ३० प्रतिशत केसमा मात्र लजालु स्वभाव वंशाणुगत हुने गरेको उनको भनाइ छ । बाकी ७० प्रतिशत भनेको हाम्रो वातावरणीय प्रतिक्रियाको नतिजा स्वरुप विकास हुने उनले बताइन् ।
यसरी लजालु स्वभावबारे अध्ययन गर्दा एकअर्कासग हुबहु मेल खाने, एउटै जिन शेयर गर्ने जुडुवाहरुको र आधा जीन मात्र समान भएका भिन्दै देखिने जुडुवासग तुलना गर्ने गरिएको छ । एले लगायत थुप्रै वैज्ञानिकहरुले पछिल्लो दशक मानिसको व्यक्तित्व र मानसिक स्वास्थ्य वंशसग सम्बन्धित भए नभएका बारे पत्ता लगाउन यसरी नै डिएनए परीक्षण गरिरहेका छन् । जसपछि उनीहरुले वंशभन्दा वातावरणले नै लाजलगायत व्यक्तिगत स्वभावको निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । जस्तै लजालु स्वभाव पहिलोपटक अपनाउदा एउटा बालक सबैसग नखेलेर एक्लै टाढाबाट हेरिरहन्छ । र बिस्तारै एक्लै बस्नुमा नै उसले धेरै सहज महसुस गर्न थाल्छ भने सो अनुभव उमेरसगै सामान्य बन्दै जान्छ । यस्तोमा वंश र वातावरण दुवैले यस पक्षमा प्रभाव पार्ने गरेको एले बताउछिन् । तर सो बानी मनोविश्लेषक थेरापी र अन्य थुप्रै तरिकामार्फत बदल्न सकिन्छ । क्लिनिकल मनोविश्लेषक क्लोए फोस्टरका अनुसार लजालु स्वभाव आफैमा हानिकारक होइन तर यो पछि गएर बढी सुर्ताउने बानीमा विकास भएमा चाहि समस्या हुन सक्छ ।
उनका अनुसार उनीकहँ मद्दतका लागि आउने यस प्रवृत्तिका मानिसहरुले आफूले दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने काम नगरिरहेकामा बढी चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । जस्तै कार्यालयमा सहकर्मीहरुसग बोल्नमा कठिनाइ हुनु, त्यस्तै आफ्नो मूल्यांकन हुने डरले मान्छेका अगाडि बोल्न नसक्ने । एले भन्छिन लजालु स्वभावको विकास हुनु पछाडि थुप्रै वैज्ञानिक कारणहरु छन् । त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको व्यवहारिक शैली र सोचाइ बदल्ने प्रयासयुक्त थेरापी हुन सक्छन् । यी तरिका वास्तवमै प्रभावकारी सावित भएका छन् । जसलाई ‘कग्निटिभ बिहेभरियल थेरापी, सिबीटी’ भनिन्छ । सिबीटीले लजालु स्वभावका व्यक्तिमा हुने तीन प्रकारका नकारात्मक सोचको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ भने हाम्रा केही बानीहरु राम्रोका लागि नभएर हामीलाई हानी र्पुयाइरहेको भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । जस्तै कसैलाई केही भन्नु अगाडि मनमनै पटकपटक सो वाक्य दोर्होयाएर तयारी गर्ने, बोल्दा आफ्ना अगाडिको मान्छेको आखामा नहेर्ने लगायतका व्यवहारले वास्तवमा हामीलाई समाजिक रुपमा झन असक्षम बनाइरहेको हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि सामाजिक समारोहमा सहभागी हुनु अगाडि व्यक्तिले आफ्नो प्रदर्शनप्रति अति उच्च अपेक्षा राख्ने गर्नु पनि अर्को समस्या भएको फोस्टर बताउछिन् ।
उदाहरणका लागि तिनीहरुमा आफूले बोल्दै गर्दा बीचमा कदापी अड्कीनु हुदैन र आफ्नो कुराप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित रहिरहनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ । त्यसैले यस किसिमको दबाबले पनि मानिसको व्यवहारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको बताइएको छ । यस्तोमा कसैले आफूमाथिको दबाब थोरै मात्र कम गर्न सक्यो भने पनि उसले सफलतापूर्वक सबै परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने बताइएको छ । यसैगरी सामाजिक समारोहहरुमा नियमित सहभागीता जनाएर आफूलाई चुनौति दिने गर्दा पनि आत्मविश्वासमा सुधार आउन सक्ने बताइएको छ । यसरी आफ्नो कुराले अरु दिक्क हुने वा भन्नका लागि कुरा नरहने जस्ता पक्षमा हामीले कम ध्यान दिँदै जुनसुकै अवस्थालाई पनि विशेष रुपमा नलिएर सामान्य ठानेर अर्न्तक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
लजालु स्वभावका मानिसहरु प्राय: इन्ट्रोभर्ट (बाहिर कम घुलमिल हुने, कम बोल्ने, सामाजिक कार्यमा अत्यन्तै कम भाग लिने, एक्लै बस्न रुचाउने, कम हँस्ने) हुन्छन् तर कोही कोहीमा सामाजिक गुण हुन पनि सक्छ जुन लजालु स्वभावका कारण अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै लाज नमान्ने तर इन्ट्रोभर्ट व्यक्तित्वहरु भने आफैंमा रमाउने र खुसी रहने गर्छन् । तापनि इन्ट्रोभर्टहरुले उत्साह, हर्ष ऊर्जा लगायतका भाव कमै महसुस गर्ने गर्छन् ।
यसकारण पनि मानिसको व्यक्तित्वलाई खुसीको सबैभन्दा ठूलो संकेतक मानिन्छ । यस्तोमा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी पिएचडी विद्यार्थी जेस्सी सन र उनका सहकर्मीले एउटा अनुसन्धान सञ्चालन गरेका हुन् । जसमा अरुसँग अर्न्तक्रिया गर्नमा कठिनाइ हुने इन्ट्रोभर्ट व्यक्तित्वका मानिसलाई एक हप्ताका लागि ‘एक्सट्रोभर्ट’ जस्तो अभिनय गरी धेरै बोल्न, हास्न भनिएको थियो । यस्तोमा अभिनय गरिरहेको भए पनि कतिपयले धेरै सकारात्मक भाव महसुस गरेको बताएका हुन् । तर अत्यन्तै लजालु स्वभावका व्यक्तिहरुले भने सो काम थकानपूर्ण र धेरै चिन्ता गराउने किसिमको रहेको भन्दै नकारात्मक भाव व्यक्त गरेका छन् ।
कसरी बच्ने कोरोना भाइरसबाट ?
ग्रेटर रस्मुर नेपाली कम्युनिटीद्वारा योग र ध्यान गराउदै
“मानसिक तनावबाट बचौं” मनोक्रान्ति प्रर्वतकः नगेन्द्र राज नेम्बाङ्ग
कोरोना भाइरसबारे जरूरी जानकारी :‘कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं’